NEM ego taa
NEM calculator online, onye ntụgharị NEM. NEM ego taa na ahia ahia ego di iche iche.
NEM ego na Nigerian naira (NGN)
1 NEM (XEM) nhata 18.11 Nigerian naira (NGN)
1 Nigerian naira (NGN) nhata 0.055208 NEM (XEM)
Ntụgharị NEM na Nigerian naira. Taa NEM ọnụego Ka Nigerian naira na 06/06/2020.
NEM ego na dollars (USD)
1 NEM (XEM) nhata 0.046744 dollars (USD)
1 dollar (USD) nhata 21.39 NEM (XEM)
Ntụgharị NEM na dollar. Taa NEM gbadaa dollar na 06/06/2020.
Ọnụahịa maka NEM maka taa 06/06/2020 - nkezi ọnụego usoro NEM . Ego nke NEM abụghị nke ụlọ akụ etiti guzobere, dị ka ọ dị na ndị nkịtị. Ọnụahịa NEM bụ nkezi ọnụego nke NEM maka oge ụfọdụ site na azụmahịa azụmaahịa na mgbanwe crypto. Etu ọnụahịa "NEM" 06/06/2020 "bụ maka iji n'efu. A na-emelite ozi dị na ya ozugbo.
NEM ngwaahịa taa
N’ime mkpọchi akpọrọ " NEM na Exchange taa ", anyị na-egosipụta nke kachasị mma NEM ọnụego mgbanwe na nke egoro aha ego abuo na ahia mgbanwe. N'ebe ahụ, ị ​​nwekwara ike ịhụ njikọ nke mgbanwe nke azụmaahịa azụmahịa mere. Ọnụahịa NEM na Nigerian naira bụ ntụpọ dịzi adị nke egosi ọnụahịa NEM ka Nigerian naira. A na-enweta ọnụahịa nke NEM na Nigerian naira sitere na ọnụahịa nke azụmahịa NEM megide dollar na site ọnụego nke Nigerian naira megide dollar nke bank etiti guzobere taa. Na ndepụta nke ụzọ abụọ anyị si eweta na tebụl azụmaahịa site na mgbanwe, ị ga - ahụ azụmahịa ozugbo NEM - Nigerian naira nke na-egosi ezigbo ọnụahịa azụmahịa Nigerian naira - NEM.
Ego kachasị mma maka ireahịa NEM nke ị nwere ike ịchọta na ebe a.
Ọnụahịa kacha mma maka ịzụ NEM nke ị nwere ike ịchọta na ebe a.
XEM/BTC $ 0.054126 $ 0.045059 Best NEM gbanwere Bitcoin
XEM/ETH $ 0.055421 $ 0.045564 Best NEM gbanwere Ethereum
XEM/USDT $ 0.046683 $ 0.044946 Best NEM gbanwere Tether
XEM/JPY $ 0.046519 $ 0.046519 Best NEM gbanwere Yen
XEM/UAH $ 0.046256 $ 0.044000 Best NEM gbanwere hryvnia
XEM/IDR $ 0.046033 $ 0.046033 Best NEM gbanwere Indonesian rupiah
XEM/GBP $ 0.049793 $ 0.049793 Best NEM gbanwere pound magburu onwe
XEM/KRW $ 0.046484 $ 0.046202 Best NEM gbanwere South Korean merie
XEM/INR $ 0.046053 $ 0.046053 Best NEM gbanwere Indian rupee
XEM/QC $ 0.046014 $ 0.046014 Best NEM gbanwere QCash
XEM/TRY $ 0.045199 $ 0.043056 Best NEM gbanwere New Turkish lira
XEM/XRP $ 0.046391 $ 0.046391 Best NEM gbanwere XRP
XEM/USD $ 0.046100 $ 0.045450 Best NEM gbanwere US dollar
XEM/EUR $ 0.046382 $ 0.046295 Best NEM gbanwere Euro
XEM/BITCNY $ 0.045448 $ 0.045448 Best NEM gbanwere bitCNY
XEM/BCH $ 0.046170 $ 0.046170 Best NEM gbanwere Bitcoin Cash
Ọnụahịa nke NEM na dollar bụ isi ihe na - egosi nzere NEM. Nnukwu oke nke NEM mgbanwe azụmahịa na mgbanwe dollar ka edobere na dollar. Mana ọnụahịa nke NEM bụ echiche dị iche, ebe ọnụahịa nke NEM dabere na ọnụego mgbanwe ego ego ma nwee ike ịdị iche maka iche iche. Ọnụ ahịa NEM maka taa anyị gbakọtara site na itule uru nke NEM na azụmaahịa niile na ọnụego mgbanwe dị iche iche.
Ego si NEM uru nye Nigerian naira bụ atụmatụ ego nke NEM na dollar tụgharịrị na Nigerian naira na ọkwa nke ugbu a. Iji gbakọọ ọnụ ahịa NEM gaa na Nigerian naira, anyị na-anakọta azụmahịa niile maka taa, weta ọnụego mgbanwe na dollar ma kpọghachi ha n'ọnụ ahịa US dollar ruo na Nigerian naira. NEM uru na dollar (USD) - ọnụego bụ isi nke azụmahịa azụmaahịa niile na cryptocouples na mgbanwe na-amaliteghachi. Y’oburu na uzo ahia ahia abuo di iche na mgbanwe onodu mgbanwe di, ya na onu ahia a ma obu NEM nwekwara ike di iche.
NEM onye mgbako na ntanetị - ọrụ maka ịmegharị ego nke NEM n'ime ego na ego ọzọ na ugbu a nke NEM. A na-akpọ ọrụ mkpokọta weebụ ahaziri iche maka mgbakọ na mwepụ ego ego. Lezienụ anya na ihe mgbako ọrụ ji arụ ọrụ ji arụ ọrụ NEM gaa na Nigerian naira n'ịntanetị. Ọ na-egosi ego nke Nigerian naira chọrọ ịre ma zụta ego nke NEM. Ihe oru ngo a nwere oru ihe nlere ego ego di iche na ntaneti.